ERW Coating ပိုက် - တရုတ်ထ (Tianjin) သံမဏိအရောင်း
1. အခြေခံပညာထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အမှတ်တံဆိပ် attributes 2.product ERW Coating ပိုက် (ကုန်ပစ္စည်းအမည်ဖြင့်ခွဲခြားအဆိုပြုချက်ကိုနာမကိုအမှီပါရှိသည်နှင့် 2-3 သတ်မှတ်ချက်များပါရှိသည်, ပစ္စည်း, အရောင်, အရှည် 60-80 ဇာတ်ကောင်အကြံပြု): ထ-သံမဏိမော်ဒယ်: API ကို 5L , API ကို 5CT, ASTM 53, EN10217 Din 2458. , 3589 IS, JIS ဘီ G3452, စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း၏ BS1387 လက်မှတ်: API ကို TSG ISO9001 ISO14001 CCEC မူလအစ: Heibei, တရုတ် attributes 3.custom: (ကုန်ပစ္စည်း, အရောင်, ပစ္စည်း, function ကို၏သဘောသဘာဝ , etc) 1) Coating ပိုက်ငါ့ကို ...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ERW Coating ပိုက်
(ကုန်ပစ္စည်းအမည်ဖြင့်ခွဲခြားအဆိုပြုချက်ကိုနာမကိုအမှီပါရှိသည်နှင့် 60-80 ဇာတ်ကောင်အကြံပြု 2-3 သတ်မှတ်ချက်များ, ပစ္စည်း, အရောင်, အရှည်ပါရှိသည်)
2.product attribute တွေ
3.custom attributes: (စသည်တို့ကိုထုတ်ကုန်၏သဘောသဘာဝ, အရောင်, ပစ္စည်း, function ကို,)
1) Coating ပိုက်အဆိုပါချေးပြီးနောက်အပြောင်းအလဲနဲ့အားဖြင့်သောပိုက်ကိုဆိုလိုသည်, ထိထိရောက်ရောက်သံမဏိပိုက်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဓာတု၏သင်တန်းသို့မဟုတ်လြှပျစစျထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်တားဆီးသို့မဟုတ်နှေးကွေးနိုင်သည့် တုံ့ပြန်မှုသံမဏိပိုက်ထိရောက်စွာဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် operating ကုန်ကျစရိတ်ပိုက်လျှော့ချဖို့သံမဏိပိုက်၏ချေးတားဆီးသို့မဟုတ်နှေးကွေးနိုင်ပါတယ် phenomena.Coated ။
အပေါ်ယံပိုင်းပိုက်၏ Applications ကို:
ကျယ်ပြန့်ရေနံ, ဓာတုသဘာဝဓာတ်ငွေ့, အပူ, မိလ္လာ, ကုသမှု, ရေ, တံတားများ၏လယ်ပြင်တွင်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်သောကြောင်လိမ်, ဖြောင့်ချုပ်ရိုးပိုက်, ချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်, စသည်တို့အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပိုက်အခြေစိုက်စခန်းသတ္တု Coating သံမဏိအဆောက်အဦများ, လိပ်ခေါင်းနှင့်အခြားအဏ္ဏဝါရေ။
2) နျ Standard:
သံမဏိပိုက်နှင့် fittings ၏ Polyethylene အင်္ကျီ: 30670 Din ။
DIN30678: သံမဏိပိုက်နှင့် fittings ၏ Polyethylene အင်္ကျီ။
SY / T0413-2002: သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသံမဏိ pipeling များအတွက် polythene အပေါ်ယံပိုင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း။
အမျိုးမျိုးသောသံမဏိပိုက် extemal အပေါ်ယံပိုင်းစီမံကိန်းများကိုလက်ရှိ Single-layer ကို / ကို double-layer ကို FBE, 2Pe, 3PE, 3PP နှင့်ထိုကဲ့သို့သော DIN30670, DIN30671 အဖြစ်ဖျော်ဖြေစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအခြားအ Anti-ချေးအပေါ်ယံပိုင်းအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ် DIN30678, နိုင်သလား / CSA-Z245.21-M92, SY / T4013-2002 နှင့် SY / T0315-97 စသည်တို့ကို
4. ငွေသွင်းငွေထုတ်သတင်းအချက်အလက် (ပြီးပြည့်စုံသောငွေပေးငွေယူသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုဝယ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်အောင်ဝယ်လက်များအတွက်အဆင်ပြေစေရန်)
သမားရိုးကျထုပ်ပိုး: PVC အဝတ် / ရံပုန် / ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကို
အပေါ်ယံပိုင်း type ကိုအပေါ်ယံပိုင်းအလွှာ coating ထူ
အလွှာအတွင်းပိုင်းသုံးအလွှာ polyethylene: epoxy (အစိမ်းရောင်) 2.0-4.5mm
adhensive (အဖြူ): အလယ်အလတ်အလွှာ
အလွှာပြင်ပ: polyethylene (အနက်ရောင်)
အလွှာအတွင်းပိုင်းနှစ်ဦးအလွှာ polyethylene: adhensive 2.0-4.5mm
နှစ်ဦးအလွှာအလွှာအတွင်းပိုင်း epoxy: epoxy (အစိမ်းရောင်) 400-800um
ပြင်ပအလွှာ: ပြင်းထန်မှု epoxy (Sage အစိမ်းရောင်)
အလွှာအတွင်းပိုင်းသုံးအလွှာ polyethylene: expoxy (အစိမ်းရောင်) 2.5-3mm
အလွှာပြင်ပ: polypropylene (အဖြူ)
1.FBE anticorrosive epoxy power.FBE epoxy ဓါတ်ဖွဲ့စည်းပုံ: အပိုက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် electyostatic ပက်ဖြန်း epoxy အပေါ်ယံပိုင်းတစ်ရုပ်ရှင်။ အဆိုပါအပေါ်ယံပိုင်းတစ်အပေါ်ယံပိုင်းစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းစင်ကြယ်ကောင်းသော, သက်ရောက်မှုခုခံနှင့်အပေါ်ယံပိုင်း၏ flexural ဂုဏ်သတ္တိများအပူချိန်ခုခံအားသာချက်ရှိပါတယ်။
2. 2Pe / 3PE ချေး: 2Pe / 3PE ချေးဖွဲ့စည်းပုံမှာ: သိသိသာသာဖို့ pipe.Resistant ၏ချေး၏ခြုံငုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အဲဒီမှာသုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပေါင်းစပ် epoxy အာဏာနှင့်စာအုပ်ချုပ်သမားကြိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒဏ်ရာ polyethylene အပေါ်ယံပိုင်း, ပက်ဖြန်းသံမဏိမျက်နှာပြင် electrostatic ဓာတုချေး, cathode အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်, စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစွမ်းဆောင်ရည်မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
3 ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာစေး epoxy: ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာစေး epoxy ဖွဲ့စည်းပုံမှာ: သံမဏိမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် + Filler ကျောက်မီးသွေးကတ္တရာစေးစေး anticorrosive အပေါ်ယံပိုင်းလေ့ 0.5 ~ 1.0mm ၏ပိုက်မြို့ရိုးကို corrosion.Thickness များတွင်အသုံးပြု Reinforcenment ချေးအလွှာဖွဲ့စည်းခြင်း, အဖြစ်ဖန်ထည် coated လုပ်၏ epoxy စေး။
ယခင်: New Delivery for Galvanized Welded Pipe - Tee – Rise Steel
နောက်တစ်ခု: ERW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်
6 လက်မ Erw သွပ် Coating ပိုက်
ASTM A53 Erw က Black သံပိုက်
ကာဗွန် Erw သံမဏိပိုက်လုံး
ကာဗွန်သံမဏိ Erw ပိုက်
Erw 3lpe Coating ကာဗွန်သံမဏိပိုက်လုံး
Erw က Black သံသံမဏိပိုက်
Erw က Black ပန်းချီသံမဏိပိုက်
Erw က Black သံမဏိပိုက်
Erw Coating P ကို ipe
Erw အေးက Black Square ကိုပိုက်ရှင်းပြီ
Erw En10220 သံမဏိပိုက်
ဓာတုပိုက်လိုင်းနှင့်အတူ Erw Lsaw နည်းစနစ်
Erw က Round သံမဏိပိုက်
Erw ဇယား 40 Black ကသံမဏိပိုက်
Erw Slaw Ssaw သံမဏိ tube
Erw Square ကိုပိုက်
Erw Ssaw Lsaw ပိုက်
Erw သံမဏိ 3pe အပေါ်ယံပိုင်းပိုက်
ဓါတ်ငွေ့သည် Erw သံမဏိပိုက်
အရည်သည် Erw သံမဏိပိုက်
Erw သံမဏိပိုက် / Tube
Erw သံမဏိ Tube
Erw ဂဟေဆော်ကာဗွန်က Black သံမဏိ ပိုက်
Erw / Lsaw ခရုဂဟေသံမဏိပိုက်
Erw / Lsaw ဂဟေသံမဏိ Tube စျေး
သွပ်ရည်စိမ် Erw သံမဏိပိုက်
အပျော့စားသံမဏိ Erw ကာဗွန်သံမဏိပိုက်
က Round Erw သံမဏိပိုက်
က Round ပုဒ်မ Erw ပိုက်
ငြမ်း Erw သံမဏိပိုက်
Ssaw Lsaw Erw လိုင်းပိုက်
ဂဟေဆော် Erw က Round သံမဏိပိုက်
ဂဟေဆော် Erw သံမဏိပိုက်
X42 X46 X60 X80 Erw သံမဏိပိုက်